Ubuhlungu pubis ekukhulelweni: Izimbangela Nemiphumela
Ukukhulelwa - yisikhathi yaba emnandi kunazo zonke ekuphileni sowesifazane hhayi kuphela. Iletha nalo ushintshe, ngezinye izikhathi kubuhlungu ngempela ... endaweni pubic zobuhlungu abavame ukukhala abesifazane abakhulelwe. Yiziphi ubuhlungu futhi ukuthi kubalulekile ukubhekana nazo, ukufunda lesi sihloko ngezansi.
Isimo ithambo pubic phakathi nenkathi yokukhulelwa?
symphysis pubic siqukethe uqwanga ahlobanisa ala mathambo amabili pubic. Esimweni esejwayelekile yomzimba wonke lo eziyinkimbinkimbi iduduzekile, kodwa uma sokukhulelwa kwenzeka isimo uyashintsha. I relaxin hormone, umzimba ahehe izinto eziningi ezinkulu, ephumula nemisipha. Kulokhu, amathambo ulahlekelwe baxhashazwe yabo futhi baqala ukuba washintsha esandleni - kukhona ubuhlungu pubis.
Ibanga 6-8 mm phakathi amathambo odokotela kakade cabanga simfizitom mina level, nakuba lokhu yinto engokwemvelo. Ukuze empilweni kamama kanye nengane akuyona ayingozi, kodwa udokotela kufanele wenze uphawu kumephu.
Uma amathambo iphambene ku-ke ibanga elibahlukanisile kuyinto 1-2 cm ukuxilonga "symphysis II ngezinga elithile." A lide ibanga kuka-2 cm - isigaba III degree. Happy nokubeletha esizayo, eyodwa kuphela - ubuhlungu pubic ngesikhathi sokukhulelwa akesabi ezingenzeka embungwini, okubangela ukungakhululeki umama kuphela.
Izimbangela ubuhlungu pubis ekukhulelweni
Imbangela yalesi simo odokotela ucingo ngeke bakwazi, kodwa kukhona izimo ezingase zibangele ukuthuthukiswa kulesi simo yilezi:
izithelo ezinkulu - uma isisindo kwengane lihambisana amniotic fluid kuyinto umthwalo ngempela umxhwele phezu nethambo lenqulu, omkhulu. Ngaphansi isisindo kula mathambo angase aqale ukusingatha washintsha.
Ukwabiwa ingxenye enkulu relaxin-hormone okuthiwa i - kulesi simo emisipheni kanzima sashintsha ngokuletha ubuhlungu umama e pubic. Kodwa kule ndaba, lo mntwana uyoba lula ukuba adabule emgudwini wokuzala.
nezici ezithile Female ezifweni ipheshana zemisipha - uhlangabezana komthwalo osindayo futhi kungenziwa zikhubazekile ngesikhathi isikhundla ezithakazelisayo lamathambo.
Ukungabi vitamin D3, unbalance phosphorus, i-magnesium, i-potassium, phila yokuthi i-calcium, njengoba kudingeke khona ngowesifazane okhulelwe amathambo eqinile iyaqala kabi ugxile.
Izimpawu zalesi symphysis isifo
Izimpawu zesifo kunzima ukudida okunye. Ubuhlungu endaweni pubic kuyinto olandelayo isimo. Kakhulu ukhulelwe owesifazane ukuhlupheka simfizitom, uqala ukunyakaza "e nedada." Yena liphenduka ngapha nangapha, ngezinye izikhathi ngisho ukuqala ukuxhuga ekunciphiseni izinhlungu uma uhamba.
Kancane kancane yimuphi motion ngoba umama okhulelwe uqala ukuhlaba kabuhlungu ezindlebeni: iba kwegazi eziyinkinga, isehlukaniso umlenze esandleni, twist ngapha nangapha. Owesifazane kanzima phakamisa unyawo asukume ahlale phansi. Isici esiphawulekayo sasemaphandleni iningi state ubuhlungu obuhlabayo uma izama ukukhulisa umlenze iqonde ngenkathi esimweni lisalele.
Ubuhlungu pubic futhi ahambisane sivele nezichofozo amalunga omzimba uma uhamba, ngezinye izikhathi kakhulu impela elikhulu. umama okhulelwe kufanele wazi ukuthi ngesonto lama-20 okukhulelwa, ubuhlungu ukubelesela e imbilapho, pubis namathanga avele cishe ngaso sonke isikhathi. Kodwa ngalesi simo akusona simfizitom. Uma ubuhlungu buyaqina, uhamba eziyinkinga - xhumana nodokotela wakho!
Ukuze lokho udokotela ukubhekana ukubonakala izimpawu ezingemnandi ezichazwe ngenhla? Isinyathelo sokuqala ukuba uthole ukuthi uvakashele udokotela wezifo zabesifazane-obelethisayo ke - ohlinzayo nodokotela traumatologist. Imiphumela yaloku kuhlola okungenhla kumele iqinisekise futhi bayakwenza. Imiphumela yaloku kuhlola okungenhla kunzima, ngokuvamile ubekwa ngesisekelo inhlolovo nesineke futhi palpation lendawo ezibuhlungu.
Ukukhulelwa esingaphansi amasonto 16 onguchwepheshe uyodlulisela ukuba ze-X ray. Udinga kanye ultrasound. Uma ubuhlungu obukhulu ungaboniswa futhi resonance kazibuthe noma tomography ngekhompyutha.
Ukuhlola degree of bone umehluko kubalulekile ngokukhetha amaqhinga kwesokudla bokubeletha.
Ngeshwa, ukwelashwa okuphumelelayo lesi sifo alikho, futhi abesifazane kufanele ubekezelele ubuhlungu endaweni pubic waze wabeletha. Ngemva kokubeletha, kubika nkinga yokuzibona kwavala njengoba ithambo iwela indawo. Nokho, umama okhulelwe kungaba lula isimo.
Ukuqeda zibe nobuhlungu kuzosiza ithebhulethi "Nosh-NN". Ukuvuvukala Ungasusa ikhambi "Menovazin" kudingeka bagcobe ku endaweni pubis. Uma isimila siyenzeka - ngeke gel "Chondroxide". Uma ukuntuleka umzimba ukhiphe i-calcium itholwa, kubalulekile ukuchitha ukuyiphuza inkambo amavithamini kokuqukethwe yayo. Qiniseka ukukhuluma nodokotela wakho ngaphambi kokuthatha lezi amavithamini.
Ngemva kokuzalwa, udokotela imithi ngenjongo yokuphila kwama-antibiotic. Asiza ukunciphisa ukuvuvukala bounce emuva ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Ubuhlungu endaweni pubic ngesikhathi sokukhulelwa umzimba ngokuvamile iyisiginali yokuntula iyiphi into. Hlukanisa ekudleni kwakho, engeza imikhiqizo kulapho yobisi, okusabhontshisi, imifino eluhlaza.
Nge ubuhlungu obukhulu, zama kancane ukuthutha, angihlali isikhathi eside, zama ukugwema izitebhisi. Udokotela angase akunikeze imithi ngebhandeshi elikhethekile ukhulelwe, ukuncoma iqoqo umzimba.
Izinyathelo nokuvimbela simfizita
Kunengqondo ukuphetha ngokuthi akukho pores ludlula sokukhulelwa. ubuhlungu Suprapubic Nokho, kungaba kakhulu akusibekele wakhe. Izinyathelo nokuvimbela ithambo pubis umehluko ilula:
Phakathi nenkathi yokukhulelwa, thatha eliphezulu amavithamini.
Umzimba njalo, vakashela i-swimming pool. Kuyacaca ukuthi ukuzikhandla eqinile emzimbeni "ezithakazelisayo" isikhundla kungavunyelwe, kodwa singashi ngempela ubakhohliwe akudingekile. imisipha Good ukuma kuyokusiza ukuvimbela symphysis, kodwa futhi lula inqubo lokuzalwa uqobo.
Shintsha umzimba isikhundla sakho njalo, ikakhulukazi uma elele phansi. Zama ukuhlala ukuma ka "unyawo kuya onyaweni" - ke ophazamisa ukugeleza kwegazi.
Ubuhlungu izinwele pubic kwabesifazane: kuthanda kanjani zabasebenzi?
Uma amathambo hip ahlukaniswe ezingaphezu kuka-1 cm, udokotela ngeke sivumele ukuba owesifazane abelethe ngokwemvelo. Leli cala singenzeka umsipha ukudabuka egcwele. Ukuze ugweme lokhu, wenze womama Ukubeletha.
Lapho udokotela symphysis II degree ukunikela owesifazane nokubeletha zemvelo noma ukuhlinzwa. Udokotela ubophekile ukuba wazise owesifazane mayelana yonke imiphumela kunokwenzeka. Uma ukulethwa izohluleka, ukhalo abesifazane Ungabeka ukhonkolo izinyanga ezintathu. Lapho yimpumelelo ukulethwa hip omama emuva ngebhandeshi nokunwebeka. Wayeye ukugqoka corset cishe izinyanga eziyisithupha. lokuzalwa umphumela incike ngamandla nemisipha futhi kunzima kakhulu ukubikezela. Ngakho-ke, ngisho noma ngabe II degree odokotela simfizita ngokuvamile ziphakamisa kwesigaba cesarean.
Izinga lokuqala bone umehluko akuyona contraindication ukuba nokubeletha zemvelo. Izinkinga kungavuka abesifazane ngezithelo enkulu ukhalo emincane. izimo ezinjalo udokotela enquma ngamunye.
Amathiphu ambalwa kwabesifazane abakhulelwe abahlushwa ubuhlungu pubis
Ukuze uhlushwa sebuhlungwini obunzima ezenzeke ezinyangeni zamuva, lilandele imihlahlandlela elula. Abakwazi kakhulu ekudambiseni ukungakhululeki.
Buka isisindo sakho. Ukuthola isisindo esengeziwe, ngempela ukulayisha ukhalo.
Nikeza wena nge ifenisha ukhululekile. Isihlalo kumele kube embhedeni ukhululekile - esithambile. Ngaphansi kwethanga ngesikhathi sokulala ubeka roll zokulala noma umcamelo.
Uma uhlangabezana ubuhlungu lapho sishiya nangapha, ukukwenza ngendlela ekhethekile. Okokuqala, vula emzimbeni elingaphezulu, bese qinisa futhi ukhalo. Kusukela ubuhlungu iba ngaphansi oyingozi.
Ungakhohlwa mayelana izivivinyo ezikhethekile, aqede ubuhlungu kusuka endaweni pubic. Indlela ephumelela kakhulu zalezi ubhekwa "ikati" - ume ngamadolo akhe, osizweni izandla. Nethezeka emuva yakho. Emgogodleni, entanyeni ekhanda kufanele ume emgqeni. On the exhale, Arch emuva yakho, ukwehlisa ikhanda lakhe phansi. Ngesikhathi esifanayo qinisa imisipha besisu.
Uma umsekeli imithi ehlukile, ungasebenzisa iseluleko wabelaphi ngidle kakhulu imbuzi ushizi, asithena nama-alimondi. Kungaba izikhathi eziningana ngosuku ukuba gcoba korvalola pubis. Zama ehlise!
Ubuhlungu endaweni pubic ngesikhathi sokukhulelwa kungaba evamile ngempela, futhi uphawu ingozi. Uma ukungakhululeki eqinile ungalibali Ukuvakashela udokotela. Lokhu kuzokwenza adambise isimo sakho futhi ligweme izinkinga ezingase zivele.
Indlela ukwazi ubulili wengane ongakazalwa
Pads phezu izingono - umama usizo ubuhlengikazi
Exchange ikhadi abakhulelwe
Yiziphi izinkomba sesigaba cesarean?
Ngesonto lokuqala yokukhulelwa
Indlela efanele ukubala isisindo ekukhulelweni
River Pinega: isithombe, nemingenela, ubude
Amapese we-WMF - ikhwalithi yaseJalimane
Plastic labia minora wokubuyiselwa uhlobo wangaphambili
I-arthritis yamalunga. Ukwelashwa kwe-arthritis namayeza omuntu, ukusebenza kwabo
Step by step imiyalelo ku ukuze uqondanise kanjani ithoni isikhumba
Kuthiwani uma zona kanye izinwele ewa
Encephalitis: Ukwelashwa. Ukugonywa ngokumelene encephalitis ezithwalwa: get zigonywe. Kuyini encephalitis?
Ukudla Amaphilisi Izibuyekezo abangane noma isincomo udokotela
Cruise Mediterranean kuyajabulisa zokudla